Dhaqaalaha Iyo Aqoonta Caalamka! - Xogside-news
Home WARARKA DALKA Dhaqaalaha Iyo Aqoonta Caalamka!
Dhaqaalaha Iyo Aqoonta Caalamka!
Haddii aynu ka soo qaadno in dunida korkeeda ay ku nool yihiin 100 oo keliya waxay taasi noqonaysaa in 50 rag noqdo , 50 kalena Dumar noqdaan. Dhulka ay ku nool yihiin hadayno eegno waxay noqonayaan in 60% ,Aasiya degan yihiin, 15% ay Africa ku nool yihiin, 14% latin America, 11 Ay Yurub ku nool yihiin, waa qiyaasta tirada dadka degan marka la eego wakhktigan.
Haddii la qiyaaso 100 qof diimaha ay haystaan waxay noqon lahayeen 31% dad Kiristaan , 30% Islaam, 15% Hindus, 7 Budisan iyo 16% haysta dhaqano iyo diimo kale.
Dadkaasi da’doodu waxay noqon lahayd 1-14 waa 20 qof, 15- 50 waa 50 qof, 51 -65 waa 19 qof, wixii ka sareeya 65 tiradoodu 18 qof.
Dhinaca dakhliga iyo dhaqaalaha haddii aan ka eegno 15 qof waa dadka maalintii ay soo gasho $ 2, 56 qofna maallintii waxay helaan $ 8, 12 qof maalintii dakhligoodu waa $ 17, 9 qofna dakhligoodu waa $ 30, 6 qofna maalintii waxay helaan $ 90, hal qof ayaa isna maalintii hela $ 100. Sidaas darteed 10 qof oo ka mid ah 100 qof aya maamula lacagta dunida taalla 50%. Dhinaca aqoonta 86% ayaa wax akhriya , halka 14 % aanay waxba akhriyin.
Dhinaca waxbarshada sare 7% ayaa jaamacado dhamaysta halka 93% aanay gelinba jaamacad. Mobilada waxa boqolkaasi qof sita 75% , halka 25% soo hadhayna aanay haysan. 77% dadkaasi ka mid ah ayaa guryo hela, halka 23% aanay maanta dunida hoy ku haysan.
Xaga miisanka jidhka 21 kamida dadka waa culays xad dhaafa, 63 dadkaa waa culaysi caadi ah , 15 dadkaa ka mida waxaa haya nafaqo daro, 1 dadka ka mida wuxu la ildaran yahay gaajo.
Previous articleXidhiidhka Fahamka Ardayga Iyo Quraacda!
Next articleGolaha Wakiillada Somaliland Oo Ansxixiyay Mooshin Ku Saabsan Xeerar Ay Golihii Iyaga Ka Horeeyay Ansixiyeen
Madaxweynaha Somaliland Oo Kulamo Kala Duwan La Qaatay Safiirada Midawga Yurub Iyo Dalka Iswidhan
Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka Oo Kulan La Qaatay Safiirka Cusub Ee Iswidhan U Qaabilsan Somaliland Iyo Soomaaliya
Dawladda Hoose Ee Caasimadda Hargeysa Oo Raaligelin Ka Bixisay Cabasho Kasoo Yeedhay Darawallada